Chelsea oo gawsaha ka garaacdey Manchester City +SAWIRO – SBC
Chelsea oo gawsaha ka garaacdey Manchester City +SAWIRO
Manchester City oo hogaanka Premier League laga qaadi la’yahay isla markaana 14 kulan oo ka mid ah 15-ka kulan ee la ciyaaray hal marna aan dhulka la dhigin ayaa habeenimadii xaley waxay kala kulantey guuldaradii ugu horeysay galbeedka magaalada London garoonka ka dhisan ee Stamford Bridge ee kooxda Chelsea ka dib markii lagu garaacay 2-1.
Ciyaaryahanka qibrada leh ee reer England ee 33 sano jirka Frank Lampard ayaa siiyey guusha qaaliga ah kooxdiisa Chelsea ka dib markii ciyaaryahanka daafaca Man City uga ciyaara Joleon Lescott uu sheeda gooshiisa isagoo ku jira uu gacanta ku taabtey kubad ku socotey shabaqa oo uu soo laadey Daniel Sturridge oo horey uga mid ahaa kooxda Man City.
Lampard oo markii lixaad 22 kulan oo Chelsea xili ciyaareedkan safatey aan lagu bilaabin ayaa garoonka wuxuu soo galiyey tababare Andre Villas-Boas xili ciyaartu ay aheyd 1-1 waxaana uu wax ka badalay badalka uu ku soo galey garoonka qaab ciyaareedkii Chelsea iyadoo 7 daqiiqo ka dib loo dhigay gool ku laad ama rigoore kooxdiisa taasi oo uu si xarago leh ugu hubsadey shabaqa.
Inkastoo Manchester City guul daro kala tagtey magaalada London hadana ciyaaryahanka dabeecada ka aradan Mario Balotelli ayaa siiyey kooxdiisa hogaanka ciyaarta ka dib markii uu dhaliyey kubad daafaca Chelsea & goolhayehuba aan celin karin uu shabaqada dhexdhigay.
Man City waxay u maamulatey qaybtii hore ee ciyaarta sidii ay doonto iyadoo laga diidey rigoore ay dalbadeen ka dib markii kubad qaabeeyaha khadka dhexe ee reer Spain David Silva uu ku dhex legdey daacafa Cheslea Jose Bosingwa balse garsooraha ciyaarta Mark Clattenburg oo ah nin ku taqasuusay farsamada korontada ayaa madaxa ka ruxay dalabka reer Manchester.
Qaybtii labaad ee la isagu soo laabtey kulanka waxaa ciyaartoyda Chelsea ay bilaabeen kubad weerar badan taasi oo keentey in ciyaaryahanka Bortiqiiska u dhashay Raul Meireles uu luga la helo kubad uu soo qaabeeyey Daniel Sturridge isagoo ciyaarta ka dhigay 1-1.
Kulankan oo ahaa mid aad u adag oo Chelsea ay ku soo tala gashay in ay Man City ka jabiso socodkeeda laga badin la’aanta Premier League-ga ayaa fursada waxaa siiyey reer London ka dib markii kooxda martida ah ee reer Manchester uu ka qaatey kaarka cas ciyaaryahankii hore ee Arsenal Gaal Clichy kaasi oo laba kaarka hurdiga (Yellow card) uu qaatey loogu badaley kaarka cas (red card) sidaasina garoonka looga saarey.
Macalin Roberto Mancini oo xaajadu ku adkaatey oo 10 nin ku ciyaareyey wuxuu la soo baxay shax cusub isagoo weerarka yareeyey isla markaana dhexda badiyey si uu mashquul uga dhigo weerarka Chelsea, waxaana Mancini uu ku haminyey in maadama uu qof ka qaatey kaarka cas uu kulanka ka dhigo mid uu ka qaato hal dhibic oo barbar dhac ah balse taasi uma noqon sidii uu doonayey.
Kaarka cas ee uu qaatey Gaal Clichy waa kii sadexaad oo ciyaaryahan ka tirsan Man City uu qaato lix kulan oo isku xigta oo ka mid ah Premier League-ga.
Mancini wuxuu bixiyey weeraryahanka Aguero isagoo ku soo badashay xidiga daafaca Kolo Toure sidoo kale Nigel de Jong ayuu ku badaley Silva laakiin taasi ma noqon mid waabisa weerarka Chelsea.
Guuldaran Manchester City waxay fursad u tahay kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Man United oo ka hooseysa 2 dhibcood oo kaliya, waxaana Man City Axada soo socota ay kulan adag ku soo dhaweynaysaa gurigeeda kooxda Arsenal oo xiligan ah kooxda kaliya ee aan laga badin 8 kulan oo isku oo ka mid ah Premier League-ga.
Chelsea guushan waxay u aheyd mid muhiim ah waxay kaalinta sadexaad ka qabsatey Tottenham iyadoo Man United ka hooseysa 5 dhibcood, sidoo kale Tottenham waxay booska afaraad shanaad ugu riixdey Arsenal oo waqooyiga London ka wada dhisan yihiin iyadoo ka koreysa 2 dhibcood.
Meireles (daqiiqadii 34-aad)
Lampard (gool ku laad daqiiqadii 83-aad)
Goolka Man City
Bolatteli (Daqiiqdii 2-aad)
Garoonka Stamford Bridge ee kooxda Chelsea waxaa soo camiray 41,730 qof.